ZCLY-Comics Anọ Season Dehumidifiers - China Hangzhou DryAir Ọgwụgwọ
DRYAIR ZCLY-Comics Anọ Season Dehumidifiers: Akpan mere maka nwa oge saịtị, mmezi ihe, pụrụ iche sere arụmọrụ, akwa na ígwè etiti mkpuchi, na ike ga-eji na mbara niile kara aka nke afọ. DRYAIR ZCLY-Series obere Anọ Season dehumidifiers ahu nagide a Nchikota obi jụrụ usoro technology na ụgbụgbọ mmanụ aṅụ rotor dehumidification. The dehumidification na-adabere ná esịtidem jụrụ mgbe desiccant rotor n'ihu AIDS ihicha na okpomọkụ, jikọtara dehumidification na tr ...
DRYAIR ZCLY-Comics Anọ Season Dehumidifiers: Specially designed for temporary sites, maintenance events, special painting operations, bridge and steel frame coating, and can be used outdoors all seasons of the year.
DRYAIR ZCLY-Series obere Anọ Season dehumidifiers ahu nagide a Nchikota obi jụrụ usoro technology na ụgbụgbọ mmanụ aṅụ rotor dehumidification. The dehumidification na-adabere ná esịtidem jụrụ mgbe desiccant rotor n'ihu AIDS ihicha na okpomọkụ, jikọtara dehumidification na mgbanwe oge, na ihicha nke rotor bụ isi n'oge oyi. The esịtidem refrigerating usoro nke ZCLY-Series dehumidifiers bụ ikuku-mma. The ikuku-mma ofufe jiri mere a ịghasa Compressor ịzọpụta ike ma melite ọrụ kwụsiri ike nke unit. The mịrị amị ikuku tupu esichara site evaporator, na mgbe ahụ n'ihu Fikiere site rotor dị ka chọrọ ọnọdụ.
ZCLY Series obere Anọ Season dehumidifiers esichara ikuku nwere ike iru achọrọ iche nke 20-32 degrees na-erughị ma ọ bụ hà 45% ikwu iru mmiri, mgbe ihere ọnọdụ ndị -5 -40 degrees na 50-99% ikwu iru mmiri tupu nhazi. The condensers na evaporator nke nkeji na ikuku-mma ọla kọpa tubing na aluminum nku azu; The anọ ọrụ ọnọdụ 'dị ka ndị ahịa na-General Refrigerating, Nchikota Ihicha nke rotor na Wet Cooling, General ihicha nke rotor, na ihicha nke rotor na Heating.
ZCLY-Series Dehumidifiers eji akpaghị aka PLC programing ọrụ nzukọ kwa ọnọdụ arịrịọ.
Usoro ikuku olu m³ / h
Compressor ike kW
Tụkwasịnụ ofufe ike kW
Regenration okpomọkụ ike kW
Refrigeration ikike kcal / h
Total ike kW
Inlet ikuku prarmeters
Tinyekwa ikuku prarmeters
Tụkwasịnụ ikuku overbottom mgbali
Master Control Programme
Total Refrigeration, Refrigeration & rotor, rotor & okpomọkụ
Atọ-adọ, 380V, 50HZ
Hangzhou DryAir Uru:
1. Supplier maka Military Projects na China
Ruru Eru soplaya maka inye dehumidifying ngwá maka National Projects dị ka Satellite launching isi, ụgbọ agha okpuru mmiri ogige, Aircraft ụlọ, Minesweeper Sonar ụlọ nkwakọba ihe, Positive na-adịghị mma ion collider, Nuclear Power Station, agha isi.
2. The nchoputa nke rotor Dehumidification na China.
Anyị initiatively enye atụgharị isi kpọrọ nkụ Room maka Lithium Industries na China na e tinyeworo Tụgharịa isi ngwọta nke na-agụnye nnyocha, imewe, n'ichepụta, echichi, na-amalite-elu, mgbe-ọrụ nke dehumidifying ngwaahịa ebe ọ bụ na 1972.
3.Strong oru ike
The pụrụ iche ụlọ ọrụ nke nwere akwụkwọ nke GJB mba agha usoro na ISO9001 usoro n'etiti niile dehumidifier ụlọ ọrụ nke China.
The pụrụ iche ụlọ ọrụ nke nwere nnyocha na mmepe ngalaba na-enweta mba research enyem na niile dehumidifier ụlọ ọrụ nke China.
The mba hi-tech enterprise.
The mba ọhụrụ ntọala.
4.Facility, Nhazi Machines na Ule Room
5. Kachasinu Market Share na Domestic dehumidifying ahịa
Na elu technology, zuru okè nhazi, mma management, Dryair azụmahịa amalite nnọọ ngwa ngwa na lithium batrị ụlọ ọrụ na-adịbeghị anya na afọ, anyị na-enye ihe karịrị 300 tent ala igirigi ebe dehumidifiers maka lithium batrị ụlọ ọrụ ọ bụla afọ na bụ kpagburuibe na anụ ụlọ dehumidifier ahịa na anyị ahịa uru dị nnọọ n'ihu ndị ọzọ na asọmpi
Previous: ZCJ usoro Kọmpat Desiccant Dehumidifier
Next: ZCM usoro desiccant dehumidifiers
Commercial Dehumidification Equipment
Mmiri na-adọrọ Dehumidifier
ZCB usoro jikọtara Desiccant Dehumidifiers